ब्लगरका लागि आचारसंहिताको आवश्यकता देश वा समाज अनुसार चाहिन्छ : प्रवीण कुमार यादव - MeroReport
ब्लगरका लागि आचारसंहिताको आवश्यकता देश वा समाज अनुसार चाहिन्छ : प्रवीण कुमार यादव
आफूलाई चिनाउन १ वर्ष अघिमात्र काठमाडौं आएका हुन् प्रवीण कुमार यादव । अंग्रेजी भाषा शिक्षणमा स्नातकोत्तर छन् प्रवीण । प्रवीण अहिले किङ्गस कलेजमा अंग्रेजी लेखन र साहित्यमा अध्यापकको रुपमा कार्यरत छन् । अध्यायपनका साथै रिपब्लिका दैनिकमा अनुवादक, पत्रकार र अंग्रेजी सामाचार तथा फिचर लेखकसमेतका रुपमा कार्यरत प्रवीण ब्लग लेखनमा पनि सक्रिय छन् । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै प्रवीण कुमार यादवसँग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनिसँग गरिएको कुराकानी :
प्रवीण कुमार यादवलाई सोसल मिडियामा के भनेर चिनाउन चाहानुहुन्छॽबताइदिनुस न ।
म आफूलाई सोसल मिडियामा एउटा जिम्मेवार नागरिकको रुपमा चिनाउन चाहन्छु, किनभने मेरो बिचारमा एक जिम्मेवार नागरिक नै कुशल शिक्षक, पत्रकार र लेखक हुन्छ ।
ब्लगिङ गर्न कहिलेदेखि थाल्नुभयो र कसरी सुरु गर्नुभयो ॽ
अंग्रेजी प्राध्यापक र ब्लगरहरुको एक समुहद्वारा सुरु गरिएको ब्लग ( www.eltchoutari.com / www.neltachoutari.wordpress.com )का बारेमा सन् २००९ मा थाहा पाएको भएता पनि सन् २०१० देखि नै मैले आफैँ ब्लग पोष्टहरु लेख्न थाले । मैले ब्लगिङमै मास्टर्सको थेसिस गरें अनि मैले अनुसन्धानमूलक लेख पनि लेखें ।
अंग्रेजी भाषा शिक्षण, लेखन तथा पत्रकारिता, र सोसल मिडियासँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरु र ब्लगिङ मेरो रोजाईमा पर्छन् ।
केका लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ ॽ
अंग्रेजी भाषा शिक्षणका लागि चाहिने सामग्री, अनुभब शेयर गर्न तथा समसामयिक बिषयवस्तुहरुका बारेमा तथ्य र तर्कहरु लेखी आफ्ना लेखन सीपलाई अझ तिखार्नका निम्ती ब्लगिङ गर्दछु ।
तपाईले https://praveenkumaryadav.wordpress.com/ बाहेक अरु पनि चलाउनु हुन्छ ॽ
मैले आफ्नो व्यक्तिगत ब्लग बाहेक www.eltchoutari.com संचालनका लागि प्राविधिक तथा सम्पादन सहयोग प्रदान गर्नुका साथै आफू पनि ब्लगहरु लेख्दछु । सुरुमा मैले केही ब्लगहरु आफ्नो व्यक्तिगत ब्लगमा प्रकाशित गरें अनि अहिले विभिन्न स्थानमा प्रकाशित भएका लेखनहरुलाई संकलन गर्ने काम मात्र गर्दछु ।
ब्लगिङलाई निरन्तरता दिन कत्तिको सजिलो छ त ॽ
ब्लगिङलाई निरन्तरता दिन जति गार्हो छ एउटा निश्चित रणनीति अपनाएमा त्यति नै सजिलो पनि छ । पहिला केही ब्लग पोष्टहरु व्यक्तिगत ब्लगमा प्रकाशित गर्ने, अनि बिभिन्न स्थानमा प्रकाशनका लागि प्रयास गर्ने र प्रकाशित लेखनहरुलाई पछि आफ्नो ब्लगमा संकलन गर्ने गरे केही सहज भने हुनेछ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा सोसल मिडिया अझै पनि एउटा नव-माध्यमकै रुपमा रहेको छ । नेपाली प्रयोगकर्ताहरुले यस्तो सशक्त संचारका माध्यमलाई प्रोफेशनल रुपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । धेरै प्रयोगकर्ताहरुलाई के गर्नु हुने ? र के गर्नु नहुने ? भन्ने कुराको समेत जानकारी नभएको अवस्थामा सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग गरेको पाईन्छ । खास गरी मनोरञ्जनका माध्यमका लागि धेरै प्रयोग भईरहेको देख्छु । तर बिस्तारै परिवर्तन हुदैछ केही प्रयोगकर्ताहरु सोसल मिडियामा सृजनात्मक ढंगले आफ्नो पेशागत कार्यहरुलाई देखाउन थालेका छन् ।
अरुको ब्लग पनि पढ्छु । राम्रो लेखाई, समसामयिक बिषयवस्तु तथा खोजमुलक लेख तथा सामाचारहरु, अंग्रेजी भाषा शिक्षण र सोसल मिडियासँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरु समेटिएका ब्लगहरु मेरो रोजाईमा पर्छन् ।
आफ्ना कुरा ब्यक्त गर्न अहिले युवाहरुले ब्लगिङ्गप्रति आर्कषित भई रहेका छन, नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ सदुपयोग या दुरुपयोग ॽअनि कस्तो देख्नु हुन्छ ब्लगिङ्गको भविष्य ॽ
दुरुपयोग भयो होला तर म सदुपयोग नै ठान्दछु किनभने युवाहरुले ब्यक्त गर्न खोजेका आफ्ना कुराहरुको लागि ब्लगिङ एउटा चौतारीको रुपमा रहेको छ । मिडियामा सबै कुरो प्रकाशित गर्न नसकिने भएकोले पनि ब्लगिङ एक अवसरको रुपमा रहेको छ । यसले मिडिया सिन्डिकेट अर्थात चिनेको व्यक्तिहरुको मात्र आलेखहरु छापिनेलाई समेत चुनौती थपेको छ ।
अरुको विचारमा ब्लगिङले निरन्तरता नपाउनुको कारणहरु मध्ये समय होला तर मेरो विचारमा ब्लगिङ केका लागि र किन गर्ने बारेमा स्पष्ट निर्णय लिन नसेकेकाले पनि निरन्तरता दन नसकिएके होला ।
सोसल मिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकको प्रयोग प्रायोजन अनुसार फरक छन् । समान्यतया ब्लग लामो लेखाईका लागि, ट्वीटर सबभन्दा छोटो र फेसबुक ब्लग तथा ट्वीटरको बीचको फोटोसहित अलि लामो जानकारीहरु पोष्ट गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ ।
नेपाली ब्लगहरु सामाजिक हितमा लेखिएका कत्तिको पाउनु भएको छॽ
ब्लगहरु स्वतन्त्र भएकोले सामाजिक हितमा लेखिएको हुनुपर्नेमा धेरै लेखिएको पाईदैन । धेरैजसो ब्लगहरु आलोचनामा वा ब्यक्तिगत शत्रुताको प्रभावमा लेखिएका छन् । स्वतन्त्र भएपछि निष्पक्ष हुनु उति नै आवश्यक छ ।
ब्लगिङ वा ब्लगरका लागि आचारसंहिताको आवश्यकता देश वा समाज अनुसार चाहिन्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा ब्लगिङ स्वतन्त्र रुपमा रहेको छ भने हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनमा ब्लगिङ, फेसबुक तथा ट्वीटर जस्ता समाजिक थलोहरुको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाईएको छ ।
जसरी हामी समाचार माध्यमहरुमा समाचार दिदाँ वा टिप्पणी दिदाँ आचारसंहिताको कुरामा जसरी ध्यान दिन्छो त्यसरी नै ब्लगिङ गर्दा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । यसको लागि ब्लगरहरु आफै जबाफदेही हुनुपर्छ, नभए केही आचारसंहिता तथा कानुनको आवश्यकता हुनसक्ला ।
गत बर्ष हाम्रो ब्लग (www.eltchoutari.com) पढेर एउटा अमेरिकामा अवस्थित शिक्षा सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संजाल (www.edcontexts.org) ले मलाई नेपालमा अंग्रेजी शिक्षण वा शिक्षाको परिवेश कस्तो भनी एउटा ब्लग लेख्ने अवसर प्रदान गरें, मैले लेखे, प्रकाशन पश्चात १५ भन्दा बढि कमेन्टहरु पाएँ धेरै खुसी भएँ ।
ब्लगिङको महत्व थाहा पाएँ र करीब छ महिनाअघि मलाई अफ्रिकाको एक बालबालिका तथा युवाको हकहितका लागि काम गर्ने संस्थाले मलाई उनीहरुको ब्लग मा प्राविधिक तथा सम्पादन सहयोगका लागि अनुरोध गरेपछि त्यो समेत गरिरहेको छु ।
केहीले ब्लगिङलाई नागरिक पत्रकारिता पनि भन्ने गरेको पाइन्छ, के ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता नै हो त ॽ
ब्लगिङलाई नागरिक पत्रकारिताको रुपमा लिनु उचित नै होला यदि यस औजारलाई प्रयोगकर्ताले सदुपयोग गरेमा । तर हालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यसले नागरिक पत्रकारिताको भूमिका निभाएको जस्तो देखिदैन । केही समाचार ब्लग बाहेक अधिकाश ब्लगमा ब्यत्तिगत भावना पोख्ने वा अरुको खण्डन गर्ने गरेको मात्र देखिन्छ । समाजिक विषयवस्तुलाई उठान गरि लेखिएको ब्लग कमै भेटिन्छन्।